Archive du 20200418
Hamehana ara-pahasalamana Nampiana 15 andro indray
Tapaka tao anatin’ny filankevitry ny minisitra omaly zoma 17 aprily fa mitohy mandritra ny 15 andro ny hamehana ara-pahasalamana eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’I Madagasikara,
Didier Ratsiraka Aleo tohizana sy hamafisina ny fihibohana
Maro be isika manontany tena hoe inona ny fanampahan-kevitra horaisin’ny fitondram-panjakana amin’ny alahady izao. Hotohizana sa hofoanana ny fihibohana an-trano ?
Mahajanga Bajaj 100 sy fiara 7 nampidirina "fourrière"
Bajaj miisa 100 sy fiara misa 7 no nampidirina "fourrière" any Mahajanga. Noho ny fandikan’ireo mpamily ny naoty navoakan’ny kaominina ambonivohitr’i Mahajanga no voalaza fa anton’izany.
Fanamiana vaovao ho an'ny Barea Nilaza ny heviny i Abel Anicet
Taorian’ny fifaranan'ny fiaraha-miasa tamin’ny Garman namokatra ny akanjo sy fitaovana isaloran’ny Barean’i Madagasikara, dia nisy ny antso tolo-barotra
Maitre Raux Auguste Lasa naka rivotra any ambanivohitra
Efa salama tsara ary nivoaka ny hopitaly tamin'ny talata lasa teo i MeRaux Auguste.
Hopialy Itaosy Maimaimpoana ny fitaterana ireo vehivavy hiteraka
Anisan’ny mitondra faisana amin’izao fandalovan’ny tsimok’aretina coronavirus eto amintsika izao ireo vehivavy bevohoka.
Betsiboka Omena lesona sy fanazarana ny mpianatra rehetra
Nahita hevitra ny sampandraharaham-paritry ny fanabeazana [DRENETP] Betsiboka hanampiana ny mpianatra amin’izao fialan-tsasatra tsy fidiny nateraky ny coronavirus izao.
Andoharanofotsy sy Ambohijanaka Tratra ilay mpanodinkodina fanampiana
Tratra tao Andoharanofotsy sy Ambohijanaka ireo entana nahodina izay tokony ho zaraina ho an'ny vahoaka. Vary 2 taonina ao anaty gony milanja 25 kg,
Fizarana fisotroan-dronono Nilamina ny andro voalohany
Nanaja ny fandaminana napetraky ny polisy ireo zokiolona naka vola fisotroan-dronono teto an-drenivohitra ary tsy nahitana fifanosehana na fihetsika mihoa-pefy fa tena nanara-dalàna tokoa izy ireo,
Zokiolona maka fisotroan-dronono “Notsinjovina manokana ny teny Antaninarenina.”
Nanomboka omaly tetsy Antaninarenina ny fizarana ny fisotroan-drononon’ireo tokony hisitraka izany ho an’ny faritra Analamanga.
Anjanamaitso Ampitatafika Zokiolona 6 no mba nahazo fanampiana
Mifarana anio sabotsy ny 15 andro tapany faharoa hanatanterahana ny fihibohana. Nisy hatrany ny fanampiana nandeha tao anatin’izay iray volana izay saingy ny
Takaitran'ny Coronavirus Tsy maintsy hitranga ny krizy ka mila miomana
Iray volana hatreto ny fametrahana ny fahamehana ara-pahasalamana.
Mpandraharaha ara-pizahantany 1900 miliara Ariary mahery hatreto ny fatiantoka
Vokatry ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny COVID 19 manomboka ny volana Martsa 2020 dia miha-potika hatrany ny toekarena. Anisan’ny voa mafy ny sehatra fizahan-tany.
Paul Rabary “Tsy zakantsika ny endrika fihibohan’ny firenena matanjaka”
Ny 90% amin’ny Malagasy no mahantra, izany hoe latsaky ny 4000 isan’andro ny vola miditra ao aminy, hoy ny Minisitry ny Fanabezana sady mpahay fiarahamonina Paul Rabary.
67 ha sy Andohatapenaka Arovava 25 000 no nozaraina
Mandeha tsara ny hetsika fizarana arovava ho an'Antananarivo renivohitra ka minisitra 3 no hita ho tena mavitrika.
Fikambanan` ny teratany « camerounais » Nanatitra fanampiana teny amin’ny CUA
Tonga teny amin` ny Kaominina Antananarivo Renivohitra [CUA] ny fikambanan` ny teratany “Camerounais” monina sy miasa eto amintsika nitondra ny anjara birikiny amin` ny fiatrehana ny Coronavirus.
PAM Nitsinjo manokana ny mpianatra
Taorian` ny fanapahan-kevitra fa tsy maintsy hakatona ireo sekoly noho ny « coronavirus”, manohy ny fanohanana azy ireo ny PAM,